Tambo nyowani dzeApple Watch kubva Kochi dzichasvika pamusika muna Chikumi 12 | IPhone nhau
Tambo nyowani dzemudzidzisi dzeApple Watch dzichasvika pamusika muna Chikumi 12
Kanopfuura mwedzi wapfuura, isu takatora nyaya yaiti iyo Cupertino-based kambani yakaronga kuvhura tambo nyowani mushure mekudyidzana neimwe fashoni kambani. Pane ino nguva, iyo kambani yakasarudzwa yaive Coach New York, asi kusiyana neHermès tambo, izvi zvinotanga kutengeswa zvakazvimiririra Pasina kutenga imwe Apple Watch, kunyangwe kweinopfuura chete mwedzi kwatova kukwanisa kuzvitenga zvakazvimiririra pamutengo unotanga pa350 euros.
Asi zvakasiyana nemabhande eHermès, tambo dzese kubva kune iyi firm ichave ichiwanikwa ye150 euros. Iyo femu ichatangisa ino Svondo iri kuuya masitaera matatu matsva emabhanhire ayo anowanikwa mumavara matatu akasiyana, sekureva kwaHaute Ecriture. Pakutanga, tambo idzi dzinenge dzichiwanikwa muzvitoro zvaCoach muNew York, California neNevada, asi munguva pfupi iri kutevera vachange vachiwanikwa muApple Store, nekuti kwechinguva izvo zvikamu zvichashomeka.
Parizvino isu hatizive saizi dzetambo idzi, asi zvimwe icharova pamusika muhukuru 38 uye 42 mm uye nemaviri marefu tambo akareba sezvinoitika neApple Watch iyo kambani parizvino inotengesa mune ese mamodheru ane tambo yepurasitiki.
Parizvino uye senguva dzose, mabhanhire aya anongowanikwa muUnited States, saka isu tichafanirwa kumirira mwedzi mishoma kuti tishandure Apple Watch yedu netambo idzi. Chinhu chinoshamisira pane zvese ndechekuti Murairidzi haamiriri Apple kuti aunze mabhanhire matsva aya zuva rinotevera, kuMusangano weVashanduri uchaitwa Muvhuro unotevera, Chikumi 13.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tambo nyowani dzemudzidzisi dzeApple Watch dzichasvika pamusika muna Chikumi 12
Izvozvi, izvozvi, izvozvi, izvozvi ... Maitiro chenjera neizvozvo kana uchinyora. 😉
Izvozvi, izvozvi, izvozvi, izvozvi ... Chenjera nezvinhu izvo kana uchinyora ... 😉
Shazam ikozvino zvitoro zvekutsvaga kana tisina kubatana
Tiri kufarira iyo nyowani Snapchat yekuvandudza, yakawanda